Izinzuzo zenqubo yokwelashwa kwamanzi angcolile we-MBR-izindaba zezimboni-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Izinzuzo zenqubo yokuphathwa kwamanzi amdaka ye-MBR
Isikhathi: 2020-08-05 Hits: 92
(1) Ungasusa ngempumelelo ukungcola
Inqubo yokwelapha indle ye-MBR ingasusa ngokuphelele ngokuphelele izinhlayiya eziqinile zokuthuthwa kwendle. I-membrane yemojula ye-biomembrane ine-porility ephansi, enobukhulu be-pore obungaba ngu-0.01um, engakwazi ukusebenzisa wonke ama-solids amisiwe ne-sludge ku-reactor. Ngasikhathi sinye, inomphumela omuhle wokuhlukanisa uketshezi oluqinile. Izinga lokwenqatshwa lidlula i-99%, kanti ukwelashwa kokuthukuthela kwendle kungaphezulu kwe-90%. Ukuguquguquka kokungcola kwaso kungaqhathaniswa nokwamanzi ompompi. Ngenxa yomthelela omuhle wokumelana kwemojuli ye-biofilm, yonke i-sludge esetshenzisiwe ekusetshenzisweni kwendle ishiyelwe kuyo, futhi ukugcwala kwe-sludge ku-reactor kungafinyelela ku-40-50g / L, okunciphisa umthwalo we-bioreactor's Sludge. Inqubo yokuphathwa kokukhucululwa kwendle i-MBR inesilinganiso sokususwa kwe-COD esingaphezulu kwama-94% wokukhucululwa kwendle yasekhaya kanye nesilinganiso sokususwa kwe-BOD okungaphezulu kwama-96%. Kumele kuqashelwe lapha ukuthi lapho ukwelashwa kwendle kwenziwa, imodyuli ye-membrane ene-porcious efanelekile kufanele ikhethwe ekwelashweni kwendle. Ngasikhathi sinye, inqubo yokuhlanza indle ye-MBR nayo ingaba nomphumela ongcono wokwelashwa ezinhlobonhlobo zamagciwane namagciwane, ngaleyo ndlela yenze lula ukuhamba kwenqubo yokuhambisa indle.
(2) Ukuguquguquka okuphezulu nokusebenziseka okuhle
Ekwelapheni indle, yonke inqubo yenqubo yendabuko yokwelashwa yinde, imishini ithatha indawo enkulu, futhi ngasikhathi sinye, ikhwalithi yokungcola ayinakuqinisekiswa ukuhlangabezana namazinga ekhwalithi. Kodwa-ke, inqubo yokuhlanzwa kwamanzi amdaka ye-MBR inenqubo emfushane ne-footprint encane, futhi ibuye iguquguquke kalula uma kukhulunywa ngokulungiswa kwamanzi angcolile. Lapho ulawula umthamo wamanzi, imojuli ye-biofilm ingakhuphuka noma yehle ngokuya ngezidingo zangempela zokuphathwa kwendle, ukuze kuqedelwe ukulungiswa okuguqukayo kokukhipha amanzi. Yonke le nqubo ilula kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Enqubeni yendabuko yokwelashwa kwendle, ubuchwepheshe obuhlukanisayo bokusebenzisa uketshezi ukusebenzisa ithangi lesibili le-sedimentation ukuhlukanisa okuqinile noketshezi. Kodwa-ke, le ndlela kulula ukudala ukwanda kwendle, futhi inqubo yokwelashwa kwamanzi angcolile ayidingi ukusetshenziswa kwamathangi wesibili we-sedimentation. Ingakwazi ukuqedela ukwahlukana okuqinile-ketshezi, kunciphise kakhulu ubunzima bokuphathwa kokusebenza, okwenza inqubo yokuphathwa kwendle isebenze ngokwengeziwe, futhi ubuchwepheshe bezokwelashwa kwendle be-MBR bungaqaphela ukulawula okuzenzakalelayo kokuphathwa kwendle, okuhlangabezana nezidingo zamabhizinisi ezokwelapha indle 'ezisebenzelayo yobuchwepheshe bokwelashwa kwendle.
(3) Kuxazululwe inkinga yokwelashwa kwe-sludge
Ngenqubo yendabuko yokwelashwa kwendle, ukwelashwa kwe-sludge kudinga ukwakheka kwenqubo ehlukile, okuholela esimweni sokuthi ukuhamba kwenqubo yonke kuyehla kakhulu ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kokulashwa kwendle. Inqubo yokuhlanza imfucuza ye-MBR ingashiya wonke ama-sludge ku-reactor, ngaleyo ndlela inciphise umthwalo we-sludge. Izakhamzimba ezisebenza nge-reactor ziyindlala. Ama-microorganisms ku-sludge atholakala endaweni yokuphefumula yangaphakathi. Isivuno se-sludge siphansi kakhulu, okuphumela ekukhiqizweni okuncane kakhulu kwezinsalela, kanti i-SRT inwetshwa ngempumelelo. Iqoqo le-sludge elisala kwinqubo yokuhlanza indle ye-MBR liphezulu kakhulu, kanti i-sludge ingadonswa ngokuqondile ngaphandle kokuhlinzwa kwe-sludge ngesikhathi sokwelashwa, okusindisa inqubo yokwelashwa kwe-sludge futhi iphinde ikhuphule ukusebenza kahle kokwelashwa kwe-sludge, Yehlisa izindleko inqubo yokwelashwa kwendle, xazulula inkinga yokwelashwa kwe-sludge. Idatha efanelekile ibonisa ukuthi isikhathi esifanele sokukhipha i-MBR kufanele sibe cishe izinsuku ezingama-35 lapho welapha indle yasekhaya.
Okwedlule: Kunzima ukwelapha ukuthuthwa kwendle esibhedlela? I-SH Technology ihlole indlela yayo
Okulandelayo: Indlela yokusebenza kanye nefomu elisebenzayo lenqubo yokuhlanza indle ye-MBR